Mid ka mid ah xulashooyinka ugu muhiimsan ee dhalashada ee aad heli karto waa dhowrista dhiiga xudunta ilmahaaga. Xitaa haddii aad wax ka akhrisay ama tixgelisay ilaalinta dhiigga xudunta uur hore, waxay u badan tahay in qiimaha unugyada jirrida ay si aad ah u kordheen tan iyo markaas. Dhiigga xididku waa dhiigga ku hadha xudunta kadib marka ilmahaaga la dhalo oo xadhigana la jaro. Nidaamka ururinta ayaan khatar ugu jirin hooyada ama ilmaha dhasha. Dhiigga xididku waa isha hodanka ku ah unugyada asliga ah, kuwaas oo loo isticmaalo daaweynno badan oo nafo lagu badbaadiyo maanta. Intaa waxaa sii dheer, unugyada asliga ah waxay muujinayaan balanqaad ku saabsan daaweynta dhaawaca maskaxda, curyaaminta maskaxda iyo Nooca 1aad ee sonkorowga.
Faa'iidooyinka Ilaalinta Unugga Dhiigga Xidida Dhiigga
Kahor booqashadaada 28-wiig ee gulukooska, waxaan kaa codsaneynaa inaad daawato fiidiyow waxbarasho oo gaaban oo ku saabsan mowduuca bangiga dhiigga. Soo bandhigiddan firfircoon waxay socotaa ugu yaraan 10 daqiiqo waxaana loogu talagalay in lagu ogeysiiyo faa'iidooyinka ilaalinta unugyada asliga ah ee xididdada dhiigga. Markaad ku soo noqoto xafiiska si aad ugala hadasho natiijooyinka baaritaanka gulukooskaaga 28 asbuuc, waxaa lagu weydiin doonaa inaad saxiixdo foom, oo xaqiijinaya inaad dib u eegis ku sameysay bandhigga.
Waxaan halkaan u joognaa inaan ka caawinno su'aalaha ama waxyaabaha la xiriira
Tani waa go'aan muhiim u ah adiga iyo reerkaaguba inaad ka fiirsataan, sidaa darteed waxaan idinku dhiiri galinaynaa inaad daawataan muuqaalkan dadka aad jeceshahay Waxaa jira hal fursad oo keliya waqtiga uu ilmahaagu bixiyo si loo soo qaado dhiigga xudunta. Waxaan rabnaa in si fiican lagugu ogeysiiyo waxyaabaha aad kala dooran karto sidaa darteed waxaan halkaan u joognaa inaan kaa caawinno su'aalaha dheeraadka ah.
Dr. Alexandra Schueler Dr. Carrie Soder Dr. Kevin Hackett Dr. Lauren Sagaria Dr. Ann Marie Wurst Dr. Erika Boothman Dr. Amy W. Rahl Dr. Joanna Buell Goobta Columbus Goobta Westerville Goobta Dublin Guudmarka Uurka